【 အလှအပနှငျ့ကနျြးမာရေး 】သတိပွုစရာ သှေးလှနျတုပျကှေး အန်တရာယျအကွောငျး | Opinion Leaders
ဒီရကျပိုငျး COVID 19 ကွောငျ့ စိတျပူနကွေတဲ့အခြိနျ မမေတေို့ မမေ့ထားသငျ့တာကတော့ သှေးလှနျတုပျကှေး အန်တရာယျပါ။ ခုရကျပိုငျး မိုးစရှာလာတာနဲ့ ခွငျတှပေေါကျဖှားလာမယျ။ ဒီ (Dengue fever) လို့ချေါတဲ့ သှေးလှနျတုပျကှေးဖွဈသူဟာ မွနျမာနိုငျငံမှာ နှဈစဉျ သောငျးဂဏနျး လောကျရှိပွီး အသကျဆုံးရှုံးသူ ရာခြီရှိပါတယျ။ အခုအပတျမှာတော့ သှေးလှနျတုပျကှေး ဘာကွောငျ့ဖွဈရတာလဲ ဘယျလိုလက်ခဏာတှေ သတိပွုရမလဲ ဆိုတာဖျောပွပေးမှာပါ။
သှေးလှနျတုပျကှေး (Dengue fever) ဘာကွောငျ့ဖွဈတာလဲ?
ခွငျကိုကျရငျ သှေးလှနျတုပျကှေးဖွဈတတျတာ လူတိုငျးသိကွပါတယျ။ သှေးလှနျတုပျကှေး ဖွဈစတေဲ့ Dengue virus ကို သယျဆောငျတဲ့ Aedes (အေးဒီးဈ) ခွငျကြား အကိုကျခံရ ခွငျးကွောငျ့ ဖွဈတာပါ။ ဒီအေးဒီးဈခွငျကြားအမက သှေးလှနျတုပျကှေး ဖွဈနတေဲ့ လူဆီက သှေးကို စုပျယူလိုကျမယျ ပွီးရငျ သူ့ခန်ဓာကိုယျထဲမှာ ဒီ virus တှပှေားမယျ ဒီလို Dengue virus တှသေယျဆောငျထားတဲ့ခွငျက နောကျလူတယောကျဆီကိုကျတဲ့အခါ သူ့ရဲ့ တံတှေးဂလငျးထဲက saliva တံတှေးကတဆငျ့ ကူးစကျစေ ပါတယျ။ ဒီခွငျတှကေ နအေ့ခြိနျမှာ အမြားအားဖွငျ့ ကိုကျလရှေိ့ပွီး ရကွေညျ၊ ရသေနျ့တှငျ ပေါကျပှားလရှေိ့ပါတယျ။ တနှဈပတျလုံး သှေးလှနျ တုပျကှေး ဖွဈနိုငျပမေယျ့ မိုးရာသီမှာ ခွငျကြားအမြားဆုံးပေါကျပှားတာကွောငျ့ အဖွဈမြားဆုံးပါ။
ဒီဗိုငျးရပျဈက Flavivirus အုပျစုဝငျဖွဈပွီး RNA virus အမြိုးအစားဖွဈပါတယျ။ Dengue virus က ခွငျကိုကျခံရတဲ့အခါ ခွငျရဲ့ saliva ကတဆငျ့ ကိုကျခံရတဲ့သူရဲ့ သှေးထဲရောကျမယျ သှေးဖွူ ဥလေးတှထေဲ ဝငျရောကျပီး သှေးဖွူဥလေးတှကေ ခန်ဓာကိုယျထဲ ပွငျပကရောဂါပိုး တခုခု ဝငျနတော တုံ့ပွနျတဲ့အနနေဲ့ Cytokines, interferons စတဲ့ အခကျြပွပစ်စညျးတှထှေကျတယျ။ ဒီပစ်စညျးတှကေ ဖြားခွငျး၊ ကိုယျလကျကိုကျခဲခွငျးစတဲ့ လက်ခဏာတှဖွေဈစတောပါ။ ဒါ့အပွငျ သှေးကွောမြှငျလေး တှရေဲ့ အရညျစိမျ့ထှကျမှုအား capillary permeability တကျတာကွောငျ့ သှေးကွောထဲက အရညျတှေ အပွငျထှကျမယျ။ အသညျးကိုလညျး ထိနိုငျသလို ခွငျဆီက သှေးမှားဥထုတျတာလညျး နညျးစတောကွောငျ့ သှေးထှကျတာတှဖွေဈတာပါ။
Dengue virus serotypes ၅ မြိုးရှိပါတယျ။ Serotype တဈမြိုးစီအပျေါ ခန်ဓာကိုယျက ထှကျတဲ့ ခုခံမှုက သီးခွားဖွဈပီး အခွား serotype တခုအတှကျ မကာကှယျနိုငျပါဘူး။ ဒါကွောငျ့မို့ မိမိကလေး သှေးလှနျတုပျကှေးဖွဈဖူးလို့ နောကျတကွိမျ မဖွဈနိုငျတာ မဟုတျပါဘူး။ နောကျတကွိမျ ခွငျကိုကျမခံရအောငျ ဂရုစိုကျသငျ့ပါတယျ။
အသကျအရှယျမရှေးဖွဈနိုငျပမေယျ့ ကလေးတှမှော ပိုအဖွဈမြားပါတယျ။ အမြားအားဖွငျ့ အသကျ ၅နှဈမှ ၁၅နှဈအတှငျး အဖွဈမြားတာ တှရေ့ပွီး ကြား မ မရှေးဖွဈနိုငျပါတယျ။ လူကွီးတှမှောဖွဈခဲ့ရငျတော့ ဆီးခြိုရောဂါ၊ ရငျကွပျရောဂါ စတဲ့ နာတာရှညျရောဂါရှိတဲ့သူတှမှော ဖွဈခဲ့ရငျတော့ အသကျအန်တရာယျရှိနိုငျပါတယျ။
၂)ခန်ဓာကိုယျမှာအနီစကျ rash တှထှေကျခွငျး၊
၅)အော့အနျဝမျးပကျြခွငျး စတဲ့ လက်ခဏာမြိုးစုံနဲ့ တှတေ့တျပါတယျ။
ဒါ့အပွငျမိမိကလေးမှာ အောကျပါအခကျြတှရှေိရငျတော့ အန်တရာယျလက်ခဏာတှဖွေဈလို့ အထူးသတိပွုရမှာပါ-
-ကျောဖီနှဈရောငျ အနျခွငျး၊ နှာခေါငျးသှေးလြှံခွငျး၊ သှားဖုံးသှေးယိုခွငျး
- နုံးခှခွေငျး၊ ဂနာမငွိမျဖွဈခွငျး
ဒီအခကျြတှထေဲက တခုခုရှိနရေငျ ဆေးရုံခကျြခငျြးသှားဖို့လိုပါတယျ။ သှေးလှနျတုပျကှေးကွောငျ့ သှေးလနျ့ခွငျး (Dengue shock syndrome) ဖွဈနိုငျပါတယျ။
ကလေး အဖြားကပြွီး ပွနျကောငျးလာတဲ့ recovery phase မှာခွဖေဝါး လကျဖဝါးတှကေလှဲလို့ နရောအနှံ့Dengue recovery rash တှရေ့တတျပါတယျ။ယားလညျး ယားတတျပါတယျ။
နီးစပျရာ ဆေးခနျးမှာ အမွနျဆုံးပွသပွီး သှေးပေါငျခြိနျတိုငျးကိရိယာ နှငျ့ (Hess test) ပွုလုပျ ခွငျး နှငျ့ လိုအပျတဲ့သှေးစဈဆေးမှုတှေ ဖွဈတဲ့ သှေးလှနျတုပျကှေး ရှိ/မရှိ (NS1Ag) စဈဆေးခွငျး၊ dengue virus specific antibodies (IgG, IgM) စတာတှေ စဈဆေးခွငျးဖွငျ့လညျး သိနိုငျပါ တယျ။
အားလုံးပဲ သှေးလှနျတုပျကှေး လက်ခဏာတှအေကွောငျး သိရှိပွီး သတိပွုနိုငျကွပါစေ။
ဇီဝက (ဆေး-၁ )
ဒီရက်ပိုင်း COVID 19 ကြောင့် စိတ်ပူနေကြတဲ့အချိန် မေမေတို့ မေ့မထားသင့်တာကတော့ သွေးလွန်တုပ်ကွေး အန္တရာယ်ပါ။ ခုရက်ပိုင်း မိုးစရွာလာတာနဲ့ ခြင်တွေပေါက်ဖွားလာမယ်။ ဒီ (Dengue fever) လို့ခေါ်တဲ့ သွေးလွန်တုပ်ကွေးဖြစ်သူဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ နှစ်စဉ် သောင်းဂဏန်း လောက်ရှိပြီး အသက်ဆုံးရှုံးသူ ရာချီရှိပါတယ်။ အခုအပတ်မှာတော့ သွေးလွန်တုပ်ကွေး ဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာလဲ ဘယ်လိုလက္ခဏာတွေ သတိပြုရမလဲ ဆိုတာဖော်ပြပေးမှာပါ။
သွေးလွန်တုပ်ကွေး (Dengue fever) ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲ?
ခြင်ကိုက်ရင် သွေးလွန်တုပ်ကွေးဖြစ်တတ်တာ လူတိုင်းသိကြပါတယ်။ သွေးလွန်တုပ်ကွေး ဖြစ်စေတဲ့ Dengue virus ကို သယ်ဆောင်တဲ့ Aedes (အေးဒီးစ်) ခြင်ကျား အကိုက်ခံရ ခြင်းကြောင့် ဖြစ်တာပါ။ ဒီအေးဒီးစ်ခြင်ကျားအမက သွေးလွန်တုပ်ကွေး ဖြစ်နေတဲ့ လူဆီက သွေးကို စုပ်ယူလိုက်မယ် ပြီးရင် သူ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ ဒီ virus တွေပွားမယ် ဒီလို Dengue virus တွေသယ်ဆောင်ထားတဲ့ခြင်က နောက်လူတယောက်ဆီကိုက်တဲ့အခါ သူ့ရဲ့ တံတွေးဂလင်းထဲက saliva တံတွေးကတဆင့် ကူးစက်စေ ပါတယ်။ ဒီခြင်တွေက နေ့အချိန်မှာ အများအားဖြင့် ကိုက်လေ့ရှိပြီး ရေကြည်၊ ရေသန့်တွင် ပေါက်ပွားလေ့ရှိပါတယ်။ တနှစ်ပတ်လုံး သွေးလွန် တုပ်ကွေး ဖြစ်နိုင်ပေမယ့် မိုးရာသီမှာ ခြင်ကျားအများဆုံးပေါက်ပွားတာကြောင့် အဖြစ်များဆုံးပါ။
ဒီဗိုင်းရပ်စ်က Flavivirus အုပ်စုဝင်ဖြစ်ပြီး RNA virus အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ Dengue virus က ခြင်ကိုက်ခံရတဲ့အခါ ခြင်ရဲ့ saliva ကတဆင့် ကိုက်ခံရတဲ့သူရဲ့ သွေးထဲရောက်မယ် သွေးဖြူ ဥလေးတွေထဲ ဝင်ရောက်ပီး သွေးဖြူဥလေးတွေက ခန္ဓာကိုယ်ထဲ ပြင်ပကရောဂါပိုး တခုခု ဝင်နေတာ တုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ Cytokines, interferons စတဲ့ အချက်ပြပစ္စည်းတွေထွက်တယ်။ ဒီပစ္စည်းတွေက ဖျားခြင်း၊ ကိုယ်လက်ကိုက်ခဲခြင်းစတဲ့ လက္ခဏာတွေဖြစ်စေတာပါ။ ဒါ့အပြင် သွေးကြောမျှင်လေး တွေရဲ့ အရည်စိမ့်ထွက်မှုအား capillary permeability တက်တာကြောင့် သွေးကြောထဲက အရည်တွေ အပြင်ထွက်မယ်။ အသည်းကိုလည်း ထိနိုင်သလို ခြင်ဆီက သွေးမွှားဥထုတ်တာလည်း နည်းစေတာကြောင့် သွေးထွက်တာတွေဖြစ်တာပါ။
Dengue virus serotypes ၅ မျိုးရှိပါတယ်။ Serotype တစ်မျိုးစီအပေါ် ခန္ဓာကိုယ်က ထွက်တဲ့ ခုခံမှုက သီးခြားဖြစ်ပီး အခြား serotype တခုအတွက် မကာကွယ်နိုင်ပါဘူး။ ဒါကြောင့်မို့ မိမိကလေး သွေးလွန်တုပ်ကွေးဖြစ်ဖူးလို့ နောက်တကြိမ် မဖြစ်နိုင်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ နောက်တကြိမ် ခြင်ကိုက်မခံရအောင် ဂရုစိုက်သင့်ပါတယ်။
အသက်အရွယ်မရွေးဖြစ်နိုင်ပေမယ့် ကလေးတွေမှာ ပိုအဖြစ်များပါတယ်။ အများအားဖြင့် အသက် ၅နှစ်မှ ၁၅နှစ်အတွင်း အဖြစ်များတာ တွေ့ရပြီး ကျား မ မရွေးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ လူကြီးတွေမှာဖြစ်ခဲ့ရင်တော့ ဆီးချိုရောဂါ၊ ရင်ကြပ်ရောဂါ စတဲ့ နာတာရှည်ရောဂါရှိတဲ့သူတွေမှာ ဖြစ်ခဲ့ရင်တော့ အသက်အန္တရာယ်ရှိနိုင်ပါတယ်။
၂)ခန္ဓာကိုယ်မှာအနီစက် rash တွေထွက်ခြင်း၊
၅)အော့အန်ဝမ်းပျက်ခြင်း စတဲ့ လက္ခဏာမျိုးစုံနဲ့ တွေ့တတ်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင်မိမိကလေးမှာ အောက်ပါအချက်တွေရှိရင်တော့ အန္တရာယ်လက္ခဏာတွေဖြစ်လို့ အထူးသတိပြုရမှာပါ-
-ကော်ဖီနှစ်ရောင် အန်ခြင်း၊ နှာခေါင်းသွေးလျှံခြင်း၊ သွားဖုံးသွေးယိုခြင်း
- နုံးခွေခြင်း၊ ဂနာမငြိမ်ဖြစ်ခြင်း
ဒီအချက်တွေထဲက တခုခုရှိနေရင် ဆေးရုံချက်ချင်းသွားဖို့လိုပါတယ်။ သွေးလွန်တုပ်ကွေးကြောင့် သွေးလန့်ခြင်း (Dengue shock syndrome) ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ကလေး အဖျားကျပြီး ပြန်ကောင်းလာတဲ့ recovery phase မှာခြေဖဝါး လက်ဖဝါးတွေကလွဲလို့ နေရာအနှံ့Dengue recovery rash တွေ့ရတတ်ပါတယ်။ယားလည်း ယားတတ်ပါတယ်။
နီးစပ်ရာ ဆေးခန်းမှာ အမြန်ဆုံးပြသပြီး သွေးပေါင်ချိန်တိုင်းကိရိယာ နှင့် (Hess test) ပြုလုပ် ခြင်း နှင့် လိုအပ်တဲ့သွေးစစ်ဆေးမှုတွေ ဖြစ်တဲ့ သွေးလွန်တုပ်ကွေး ရှိ/မရှိ (NS1Ag) စစ်ဆေးခြင်း၊ dengue virus specific antibodies (IgG, IgM) စတာတွေ စစ်ဆေးခြင်းဖြင့်လည်း သိနိုင်ပါ တယ်။
အားလုံးပဲ သွေးလွန်တုပ်ကွေး လက္ခဏာတွေအကြောင်း သိရှိပြီး သတိပြုနိုင်ကြပါစေ။
ဇီဝက (ဆေး-၁ )